Father Salai “Robert” Zaw Lwin, M.S. - Eucharistic Congress
၁၉၇၆ခုနှစ်မေလ၂၁ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်ပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။လာဆယ်လက်သာသနာပြု တစ် ဦး ဖြစ် သော၊Fr.Robertသည်လာဆယ်လက်တက္ကသိုလ်မှအတွေးအခေါ်နှင့်စိတ်ပညာဘွဲ့များ လက်ခံရရှိခဲ့သည် ။ Father Robert သည် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ ရှိ Ateneo de Manila တက္ကသိုလ် သင်းအုပ် ဝန်ကြီး မာစတာ ဘွဲ့ တစ် ခု ကို လည်း ရရှိ ခဲ့ သည် ။ သူ သည် ဝါရှင်တန် ဒီ စီ ရှိကက်သလစ်တက္ကသိုလ် တွင် ဆရာဝန် ဘွဲ့ ရရှိ ခဲ့ သည် ။သူ သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် နေ့ တွင် ရဟန်းတစ် ဦး အဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြီး၂၀၀၉ခုနှစ်မှ၂၀၁၄ခုနှစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံ၊မန္တလေးမြို့တော်ဘုရားကျောင်းအသင်းတော်တွင်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊မာရီရက်တာမြို့စိန့်အန်းဘုရားကျောင်းတွင်၂၀၁၄ခုနှစ်ကနေ
၂၀၂၂ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လမှစ၍အတ္တလန်တာမြန်မာကက်သလစ်အသင်း၏ရဟန်းဘုန်းတော် ကြီး (Chaplain)အဖြစ်စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Father Salai “Robert” Zaw Lwin, M.S., isanative of Myanmar. He was born on May 21, 1976.
A La Salette Missionary, he finished his studies at the University of La Salette with bachelor’s degrees in philosophy and psychology. Father Robert also earnedadegree in theological studies at the Loyola School of Theology as well asamaster’s degree in pastoral ministry from the Ateneo de Manila University in the Philippines. He obtained his doctoral degree at Catholic University of America in Washington, D.C. He was ordainedapriest on Oct. 12, 2009 and served inaparish in the Archdiocese of Mandalay, Myanmar, from 2009-2014. Father Robert served at St. Ann Church in Marietta, Georgia, from 2014-2022 and began his chaplaincy to the Myanmar/Burmese Catholic Community of Atlanta in March.